Waxaa loo adeegsaday birta sida soosaarida iyo methane soosaarka.
Carbide Aluminium waxaa badanaa loo isticmaalaa sidii wax lagu daro si kor loogu qaado awoodda saddexda alaab ee aluminiumka al-aluminium (al-Si-ALC, al-AlTI-ALC). Intaa waxaa dheer, AlC waa xarun muhiim ah oo ku taal berrinka farsamada warshadaha birta-aluminium.
Caanaha molecular Al4c3
Xeerka CAS 1299-86-1
Barta dhalaalida 2100'C
Cufnaanta qaraabada (biyo = 1) 2. 36g / cm3
Isticmaala ee metallurgy iyo catalyst, aluminium carbide waxaa loo isticmaali karaa qalab xawaare sare lagu xoqo
Caanaha kiimikada Al4C3
Miisaanka muruqyada 143.96 CAS
Muuqaalka iyo sifooyinka: kiristaalo huruud ah ama cagaar-cagaar ah ama budo ah, hygroscopic.
Barta dhalaalida (℃): 2100
Cufnaanta qaraabada (biyo = 1): 2.36
Barta karkarinta (℃): 2200 (qudhun)
Xakamaynta: aan lagu milmi karin acetone
Carbide Aluminium ayaa badanaa loo isticmaalaa sidii wax lagu daro si kor loogu qaado awoodda saddexda alaab ee aluminiumka aasaasiga ah (al-Si-ALC, al-AlTI-ALC). Intaa waxaa dheer, AlC waa xarun muhiim ah oo ku taal berrinka farsamada warshadaha birta-aluminium. Waxaa loo isticmaalaa yareynta oksaydhka biraha ee warshadaha qalliinka, kicinta falcelinta kiimikada ee warshadaha kiimikada, iyo walxaha dhoobada horumarsan sida heerkulka sare, goynta iyo caaryada warshadaha dhoobada. Maaddaama ay udub dhexaad u tahay, atomyada kaarboonku waxay ku jiraan qaab C gaar ah qaab dhismeedka shabaggii AlC. C wuxuu leeyahay alkaliin xoog leh wuxuuna soo saaraa methane iyada oo loo marayo C + 4H → CH inta lagu jiro hydrolysis, sidaas darteed AlC sidoo kale ACTS waxay u tahay matoor methane oo qalajiya. Isla mar ahaantaana, rhombohedron ee
AlC waa qaab dhismeed isku dhafan oo ah xaleefyada AlC iyo AlC. Waa qaab-dhismeedkan gaarka ah ee ka dhigaya hal-cabbir AlC nanowires aaladda elektiroonigga qabow ee iman kara.
1) aluminium nitride budada waxaa loo diyaariyaa iyadoo lagu saleynayo aluminium carbide, oo ay ku jiraan:
(a) qaddarka ku habboon ee budada micron aluminium iyo budada kaarboon micron ayaa si isku mid ah isugu qasan, loo kululeeyaa heerkul horay loo sii dejiyay oo ku jira jawi aan firfircooneyn, oo la hayo muddo, ka dibna la falgalo si loo soo saaro carbide aluminium ah;
(b) Kuleyliye carbide kuleylka heerkul cayiman oo ku socda gaaska ammonia ama gaaska nitrogen oo hayaa mudo, kuna falgal gaaska ammonia ama gaaska nitrogen si uu u sameeyo aluminium nitride jawiga heerkulka sare. Hal-abuurka, aluminium nitride budada ah waxaa lagu diyaarin karaa heerkul hooseeya, oo leh nadiif saa'id ah, cabbirka yar yar iyo qaybinta cabbirka walxaha, qaabeynta kuleylka sare iyo astaamaha kuleylka iyo farsamada aadka u fiican, oo si ballaaran loogu isticmaali karo berrinka wareega isku-dhafan qalabka substrate.
Nanoribbon carbide aluminium ayaa la diyaariyay. Qalabka lagu dhejiyo aluminium-silikoon ayaa lagu dhejiyaa foornada, albaabka foornada waa la xiraa oo foornada waxaa loo nadiifiyaa 50Pa ~ 10-3Pa, ka dibna gaaska difaaca ayaa ka buuxsamaya argon, heerkulkuna wuxuu kululaa 700 ℃ ~ 1600 ℃ ilaa 1-20 saacadood, ka dib dhalada si dabiici ah ayaa loo qaboojiyaa heerkulka caadiga ah, iyo nanoribbons aluminium badan oo huruud ah ayaa lagu soo saaraa dusha sare ee alloy iyo derbiga gudaha ee garaafka la jajabinayo. Nanoribonyada aluminium carbide ee ay diyaariyeen alifaaddu waa dhumuc dhumuc yar oo wasakh yar leh; Dhererka aluminium nanoribons waa dhowr milimitir.
Qiimaha sii kordhaya ee aluminium carbide nanoribbons waa mid aad u hooseeya. No wasakhaynta deegaanka, qalabka diyaarinta fudud.
Hore: Budada Carbide Manganese, Mn3C
Xiga: Vanadium Carbide Powder, VC
Warshadaha budada carbide Titanium aluminium
Titanium aluminium carbide Warshad
Soosaarayaasha budada carbide Titanium aluminium